मतपत्र छपाइमा बबन्डर किन ? मतपत्रमा के हो मुख्य विवाद ?
मतपत्र परिवर्तन गरी अलगअलग छाप्दा निर्धारित निर्वाचन नहुने र संवैधानिक संकट आउने विश्लेषण भइरहेको छ तर एक महिनापछि हुने निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न सुरु नै भएको छैन, जस्तो आकारमा पनि छाप्न समय छ र ...
काठमाडौं । आगामी साताबाट सेयर बजारमा १० वटा समूहगत परिसूचकहरु हुने भएका छन् । हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से ) मा नौ वटा समूहगत परिसूचक मात्र छन् । नयाँ समूहगत परिसूचकको रुपमा लघुवित्त समूह बन्ने भ...
काठमाडौँ । आराध्यदेव सूर्यको आराधना गरी महापर्व छठ बिहीबार धुमधामका साथ मनाइँदैछ । केही वर्षअघिसम्म तराईका केही जिल्लामा मात्र सीमित यो पर्व अहिले राजधानीलगायत मुलुकको प्रमुख सहरमा पनि विस्तार भएको छ...
विगतमा रोएर दिन काट्नेहरू अहिले समाजकै अगुवा
बेनी, म्याग्दी । शारीरिकरूपमा कमजोर हुँदैमा निराश र चिन्तित हुनु पर्दैन बरु मानसिकरूपमा दरलो बन्दै अगाडि बढ्ने हो भने समाजको नै अगुवा बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हातखुट्टा कृत्रिम तर दरिलो आत्मबल भएका य...
काठमाडौं । गत असोज १७ गते छ बुँदे सहमति गरी वाम गठबन्धन बनाएका प्रमुख दुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरेका छन् । घोषणापत्रलाई आइतबारसम्...
झापामा फलिँदै डेंगु
झापा। असोज पहिलो सातायता झापामा डेंगु संक्रमण फैलिँदै गएको छ । डेंगुको संक्रमणबाट अर्जुनधारा-११ की ३६ वर्षीया सुनीता अधिकारी बरालको मंगलबार मृत्यु भएपछि त्रास फैलिएको छ । बरालको नोबेल अस्पतालमा उपचारक...
वाम गठबन्धनका स्वतन्त्र सहित ६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिए
जाजरकोट । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका जाजरकोटका ६ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । फिर्ता लिने उम्मेदवारहरुमा वाम गठबन्धनबाट प्रतितिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतको बिर...
टेलिकमले नथामेपछि दोहोरो अंकले खस्कियो बजार
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनहरूमा नेपाल टेलिकमले थामेको सेयर बजारको वृद्धि कायम हुन नसकेपछि बुधबार दोहोरो अंकले घटेको छ । कारोबार सुरूभएदेखि नै घटेको बजार अन्तिम समयमा आएर १३ दशमलव ९२ अंकले ओरालो लागे...
पुनःनिर्माणमा आर्थिक अभाव भए अर्को दाता सम्मेलन : भुसाल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा पुनःनिर्माणले जनताको सोचअनुसार गति लिन नसकेको बताए । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आ...
राजविराज । सप्तरीको हनुमानगर कंकालनी नगरपालिका –१ भारदहस्थित कङ्कालनी भगवती मन्दिरमा यस वर्षको बडादशैँमा रु १४ लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । बलीसहित विभिन्न शीर्षकमा रु १९ लाख २३ हजार ८६० आम्दानी भएक...
झापा ५ मा ओलीविरुद्ध युवानेता विश्वप्रकाश शर्मालाई उठाउने तयारी
झापा । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि झापा ५ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीविरुद्ध युवानेता विश्वप्रकाश शर्मालाई उठाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय समितिले बुधबारबाट दोस्रो चरणको टिकट वित...
विगतका कुराहरु विर्सेर वाम गठबन्धनलाई जिताउन लाग्छु : देवी ज्ञवाली
काठमाण्डौ । स्थानीय चुनावमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावको विवाद निकै उत्कर्षमा पुग्यो । एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेद्वारमा उठेका देवी ज्ञवाली र कांग्रेस–माओवादी एलायन्सबाट मेयरको उम्मेद्वारमा...
काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिने निजामति कर्मचारी र सुरक्षा निकायले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतदानमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेसँगै कर्मचारी, सेना...